Barea sy Mamba: Nampiana ny Malagasy mba ho ady sahala 1 noho 1
2008-06-15 @ 16:01 in Spaoro
Angamba noho ny fahalalan’ny mpitondra fa mavesatra amin’ny mpitia baolina fandaka ny tsy fahitana ny lalao rehetra amin’ny Euro izay efa zary fahazarana, sa ny Mozambikana ve no nangataka ny fampitana mivantana ny lalao, izany hoe nividy tany amin’ny CAF ny lalao, fa dia sambany alahady roa misesy no nahita mivantana ny lalao tamin’ny fahitalavitra indray ny lalao iraisam-pirenena tahaka itony. Noho izany, na dia tsy nanatrika ny lalao teny Mahamasina aza aho mijery amin’ny fahitalavitra ihany.
Raha ny endri-dalao dia manahirana ny milaza azy satria hita fa tsy mahay na inona na inona araka ny filaza ny vahiny fa isika koa tena tsy hanino-tsy haninona, tsy mahay manararaotra sa nisozy araka ny fiteny ka nataon-kanirina vao nampivandravandra. Ny mpitantara amin’ny televiziona aloha dia gaga tamin’ny fiovan’ireo niditra voalohany ho an’ny ekipa malagasy. Tamin’ny voalohany ihany no somary nivatravatra ny vahiny fa avy eo hita ny tsy fahaizany. Nahagaga ihany noho izany raha vitsy ny baolina tafiditr’izay nifanandrina tamin’ny Mozambikana hatramin’izay nisian’ity fifanintsanana amboara eran-tany sy amboara Afrikana ity.
Tamin’ny voalohany ihany koa no nety ery ny zavatra nataon’ny Malagasy na dia tsy nahomby hatramin’ny farany aza izany. Tsikaritra avy hatrany fa “sardine” ihany ity mpiandry ny tokonan’ny vahiny ity. Saingy niova ny toe-draharaha raha nahafaty baolina tamin’ny tampoka ihany ilay lohalaharan’ny vahiny.
Hita amin’izay fa mivoraka hay ireto mpilalaontsika ireto rehefa nahafatesana baolina. Mivandravandra amin’izay ilay noheveriko ho efa voasoratro teto tamin’ny Asabotsy hoe tsy ananan’ny malagasy anie izany mpampidi-baolina izany ary mbola tsy nahatafiditra mihitsy. Ny tombatombako moa efa noresahiko tamin’ireo mpiresaka amiko ihany hoe raha amin’izao ho’aho na tsy misy mitoko io lalao io na resy iray na roa sy donga isika. Tonga dia tsy miresaka izay itenenako izany satria mahatezitra ihany izany milaza faharesena ho an’ny Malagasy izany nefa Malagasy ny tena.
Vao nahatafiditra manko ny vahiny dia niezaka ny hamaly haingana isika saingy mahavariana fa lasa ambonin’ny tolàna na tsy voadakan’izay tokony handona fotsiny dia any anaty harato ny baolina. Raha natambatra ny baolina tokony ho tafiditry ny Malagasy dia valo be izao fa noho ny tsy fahavononana hamono ‘inconsciemment’ eo amin’ny Malagasy dia rava maina fotsiny izany. Izany baolina teteniko izany anie ry mpamaky ka tsy hilana fahaizana manokan’ny mpamono baolina fa fahavononana ao an-tsaina tsy misy fihatsaram-belatsihy fotsiny. Izany, tompoko, no antsoina hoe miandry vonoina ireto nankaty amin’ny tanintsika ireto fa raha aotra ny vahiny miiba mihitsy ny antsika.
Velona amin’izay ny fifanilihana eo amin’ny samy Malagasy. Tsy manana afovoany isika raha ny fijery azy. Ilay Bôlida mba dokafana ery no tena sampona satria nanolotra mivantana ny baolina amin’ny vahiny foana. Olona roa na telo ihany no mpilalao mbola mavitrika teo amin’ny Malagasy dia Voavy sy Sedera, ny ankoatr’izay efa kivy angaha fa mandehandeha eny ambony kianja fotsiny no ataony. Baolina tokony ho azony fa mandalo eo anoloany aza manko dia jereny fotsiny. Efa in-telo nanova mpilalao mihitsy ny Malagasy ary niverina tamin’ireo nandrafitra izay nihaona tamin’ny Elefanta saingy toa tsy nanova na inona na inona izany fanovana izany. Niasa irery ireo boay tena nilalao tamin’ny fony sy ho voninahi-pireneny ireo hany ka reraka ihany koa nony farany satria sady izy tenany no mpanolotra no tolorana (mipasy sady pasiana). Izay mpiara-milalao tsy hita tamin’ny fahitalavitra izany niafenany.
Efa hifarana ny baolina ary tsy antenaina intsony ny hahatafidiran’ny mpilalao malagasy (saiky tsy nahavaky atody mandraka ity androany) baolina no nahazo penalty tampoka avy amin’ny mpitsara anjorony tamina fifanjevoana avy amin’ny daka anjoro ny malagasy. Velon’hiaka tampoka teo ny mpijery malagasy efa nanisy olona ny lalam-podiana. Ny mpitsara anjorony no nanolotra io fanomezana tena fanomezana ho an’ny Malagasy io. Efa nahazatra ny malagasy anie izany nahazo penalty tanaty lalao izany fa tsy nahatafidi-baolina e! Efa tezitra nitangorona tery amin’ilay mpitsara an-jorony ny Mpilalao vahiny saingy efa vonona ny handaka ny hanindrona ny baolina i Mamisahondra Guy Hubert ary nahatafiditra izany. Teo vao tena nila vaniny tamin’ilay mpitsara an-jorony nahazoan’ny Malagasy isa sy nahavakisany atody ny Mozambikana.
Efa tafajanona ela ny lalao ary efa niditra an-tsehatra mihitsy ny mpitandro ny filaminana Malagasy vao nanaiky hilalao ihany ny vahiny saingy enjik’olona no tena nataony. Tsy nisy baolina vanona intsony ka noravan’ny mpitsara amin’izao ilay baolina. Ho hita eo izay tena fanapahan-kevitra farany fa tahaka ny tsy vita hatramin’ny farany iny lalao iny. Raha ny fahita ny zavabitan’ny Malagasy hatramin’izao hitarafana ireo lalao telo izay miandry azy (ny lalao miverina rehetra) dia ahiana ho io baolina fanomezana nomen’ny mpitsara androany io no hany baolina ho tafiditry ny malagasy afa-tsy hoe fanomezana hafa omen’ny Mpitsara satria manenjik’isa any ho any ny Malagasy. Mbola mampieritreritra ihany hoe nampiana ve ny Malagasy tamin’ity fihodinana indray mitoraka ity sa dia sanjila fotsiny fa tsy mety resy aloha ny Malagasy hatramn’izao. Mba diso fanombanana aho izany tamin’ity indray mitoraka ity nefa izay rehetra nahita ny lalao dia hanaiky fa tokony ho marina izay nolazaiko satria fetin’ny ray androany. Mba tsy tonga dia nody koa lahy ny mpijery tavela nefa tena mamirifiry anie androany ary nanerika mihitsy aza nandritra ny fiatombohan’ny lalao.
Voamarina androany ihany koa ny fomba fijeriko amin’ny baolina malagasy fa mety ihany izay atao amin’ny fotoana tsy anantenana azy intsony nefa mamorika amin’ny fotoana iandrandrana azy indrindra. Tsy nody tampim-pahanginana angamba ny Malagasy nijery ny lalao teny an-toerana androany e!